Suuratu An-Naas - Ibsaa Jireenyaa
Jedhi, “Gooftaa namootaattin maganfadha. Mootii namootaa [kan ta’e], Gabbaramaa namootaa [kan ta’e], Hamtuu hasaasaa(waswaasaa) dhufee dhabamu irraa, Kan qoma namootaa keessatti hasaasu, Jinnii fi namoota irraa [kan ta’e irraa Rabbitti maganfadha].” (Suuratu An-Naas 114:1-6)
(Maganfachuu jechuun eeggumsa barbaadu jechuudha.)
Hasaasni sheyxaanni ammaa amma wal duraa duuban dhufe badu kanarraa eenyullee nama eegu hin danda’u Rabbii Guddaa olta’e malee. Sababni isaas, Rabbiin Gooftaa waa hundaa uume, waa hundaa argu, too’atu, waan gaarii namaaf fidu fi sharrii namarraa ittisuudha. Isa malee eenyutu sheyxaana argee sharrii isaa namarraa ittisaa? Sheyxaana Kan uume, too’atu fi amala isaa beeku Isa. Kanaafu, sheyxaana namarraa ittisu kan Danda’u Rabbiin qofa.
Yommuu Qur’aana qara’uuf jalqabdu, Rabbiin sheyxaana rahmata isaa irraa darbame irraa akka si eeguuf eeggumsa Isarraa barbaadi. Sheyxaanni warroota amananii fi Gooftaa isaanii irratti hirkatan irratti too’annaa hin qabu. Isaan too’achuun akka kaafirootaa fi warroota jallatanii badiitti isaan hin kakaasu.
3-Gooftaa fi Mootiin Isa erga ta’ee, haqaan Gabbaramaan Isa jechuudha. Akkuma Rabbiin qofti Gooftaa fi Mootii isaanii ta’e, akkasuma, Gabbaramaan (ilaahni) isaanii kan haqaa Isa qofa. Akkuma Gooftummaa fi Mootummaa Isaa keessatti shariika hin qabne, namoonni Isa gabbaruu keessattis shariika gochuufi hin qaban.
Rabbiin gabbaramaa namootaa akka ta’ee ibsuun Isarraa eeggumsa barbaadun, namni eeggumsa barbaadu kuni haqa Gooftaan isaa isarraa qabu bakkaan gahuu akka qabu isatti akeeka. Haqni kunis ibaada (gabbarri) hunda Gooftaa isaa qofaaf gochuudha. Ibaada kanniin keessaa du’aayi fi eeggumsa barbaadudha. Namni haqa Gooftaa isaa bakkaan yoo gahe, Rabbiin du’aayi (kadhaa) isaa isarraa qeebaluun isa kabaja, diinota isa jallisuuf carraaqan irraa isa eega. Diinonni kunninis sheyxaanota jinniiti fi sheyxaanota namaati. 
Aayah keessatti, “Hasaasaan (Waswaasan)” sheyxaana. Akka lugaatti hundeen hasaasa (waswasaa) sagalee ykn sochii dhokataa hin dhagahamneedha.
Kanaafu, hasaasa (waswaasa) jechuun nafseetti wanta dhokataa darbuudha. Takkaa sagalee dhokataan nama darbe malee eenyullee hin dhageenye wanta dhokataa nafseetti darbu, kan akka namni gurratti hasaasu takkaa immoo sagalee malee darbuudha. Kan akka sheyxaanni namatti hasaasu.
Hasaasni (waswasan) dubbii namni hasaasu irra deddeebi’e dubbatu waan ta’eef, hiikan akka walitti galuuf sagalee jechas ni deddeebisan. Ni jedhan, hasaasa (waswasa). Akka hiikni wanta dubbatamu hubatamuuf sagalee jechaa ni deddeebisan. Akka Afaan Oromootti sagaleen, “-sa-“ si’a lama deddeebi’e. Akka Arabiffaatti immoo sagaleen “was” si’a lama deddeebi’e. Kuni jechoota biroo keessattis ni beekkama. Fkn, kirkira lafaa. Lafti irra deddeebi’uun waan sochootuf “Kirkira” (Zalzalaa)” jedhamte. Ammas jechi, “konkolate” jedhu irra deddeebi agarsiisa. Kanaafu, hasaasni (waswasaan) wanta irra deddeebi’ame dhoksaan nafsee namaa keessatti darbamuudha. Namni yommuu namatti hasaasu dubbii isaa irra deddeebi’e dubbataa miti ree? Sheyxaannis laphee (qoma) namaa keessatti yommuu namatti hasaasu irra deddeebi’e badii namatti hasaasa.
Sheyxaanonni namaas haaluma kanaan hojjatu. Inuma balaa fi miidhaan sheyxaanni namaa fidu kan sheyxaana jinni caala. Sheyxaanni namaa jechoota karaa yaadatin darbuun qoma keessatti wiirtuu kakka’uumsa, fedhii, miiraa fi hawwii gahaniin namatti hasaasa. Sheyxaanni jinni immoo keessa nafsee irraa yaadota darba. Akka dhiigni naanna’utti nama keessa naanna’a. Yaadonni inni darbe kunniin qoma keessatti wiirtuu kakka’uumsa, fedhii, miiraa fi hawwiitti ce’u. Namni fedhii ofiitiin yommuu hasaasa kanaaf deebii kennu, adeemsi karaa irraa jallate, sharrii baay’ee namatti fidu isarraa mul’ata.
Kanaafu, hiikni “Hamtuu hasaasaa(waswaasa) dhufee dhabamu irraa” jedhu, sharrii sheyxaanaa yeroo garii duubatti deebi’e dhokatu, yeroo biraa immoo kan waswaasu ta’e irraa Rabbiin tiikfama. Aayah tana ilaalchise ibn Abbaas ni jedha: “Sheyxaanni qalbii ilma Aadam irra haguuge taa’a. Yommuu namni dagatee fi gaflaa keessa ta’u, itti hasaasa. Yommu Rabbiin yaadatu immoo duubatti deebi’e dhokata.”
Qomni namaa iddoo waswaasaati(hasaasati). Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa namoota qoruuf sheyxaana gara qoma namaatti seenu fi lixu dandeesisee jira. Akka dhiigni qaama keessa naanna’utti sheyxaannis nama keessa naanna’a. Hanga du’aatti namarraa addaan hin bahu. Hadiisa sahiih ta’e keessatti: Safiyya bint Huyeyyi [masjiida keessatti] Ergamaa Rabbitti (SAW) dhufte. Yommuu gara manaa deebitu Ergamaan Rabbii ni gageessan. Ansaarota irraa dhiironni lama isa bira darban. [Ergamaan Rabbii] isaan waamun akkana jedhen, “Ishiin Safiyyaa [haadha manaa tiyya]’Isaan lamaan ni jedhan, “Rabbiin qulqullaa’e [Akkamitti waan badaa yaadna]!’ Ergamaan Rabbiis (SAW) ni jedhan,’Sheyxaanni qaama ilma namaa keessa akkuma dhiigni naanna’u naanna’a.” (Sahih Al-Bukhaari 7171)Gabaasa biraa keessatti, ‘Sheyxaanni yaada badaa isinitti darbaa sodaadha.’ jechuun itti dabale.” (Sahih Al-Bukhaari 2038
A’uuzu billahi mina sheyxaani rajiim (sheyxaana abaarrame irraa Rabbiin tiikfama)” jechuun Rabbii guddaa irraa eeggumsa barbaadu danda’a. Akkasumas, Suuratu An-Naas qara’uu danda’a.
☛ Rabbiin Gooftaa namoota isaan uume, guddisuu fi kunuunsu waan ta’eef, nama gara Isaatti dheessun eeggumsa barbaade, sheyxaana irraa isa eega.
☛Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa Mootii waan hunda irratti aangoo qabu waan ta’eef, nama Isa irraa gargaarsa barbaade sharrii sheyxaanaa irraa ni tiiksa. Sheyxaanni too’anna Isa jala waan jiruuf.
Namni suurah armaan olii jecha jechaan hubachuu barbaadu liinki kanarraa buufachuu danda’a: https://sammubani.files.wordpress.com/2019/10/hiika-suuralee-gaggaababoo.pdf
*Tabliis ibliis fuula 60-Ibn Al-Jawzi